Aluminium Daawaha oo raqiis ah qaybo ka soo baxa alwaaxa iyo alaab-qeybiyeyaasha | Ouzhan
Sawirka siliggu wuxuu ka samaysan karaa hadhuudh toosan, hadhuudh aan kala sooc lahayn, dunta, jiingad iyo hadhuudh wareegaya iyadoo loo eegayo baahida qurxinta.
Habka sawir dusha aluminium
Sawir toosan oo xarig ah
Waxaa loola jeedaa farsameynta xarriiqyada toosan ee dusha sare ee saxanka aluminium iyadoo la adeegsanayo khilaaf farsamo.
Waxay leedahay laba shaqo oo ah ka saarista nabarrada dusha sare ee saxanka aluminium iyo qurxinta dusha sare ee saxanka aluminium. Waxaa jira laba nooc oo sawir silig toosan: silig joogto ah iyo silig goos goos ah. Qaabab isdaba-joog ah ayaa lagu heli karaa iyadoo la baarayo suufka ama burushyada birta ah ee birta ah iyada oo loo marayo xoqitaan toos ah oo toosan oo toosan oo dusha sare ee aluminiumka aluminiumka ah (sida xoqitaanka gacanta ee qalabka ku jira ama isticmaalida qorsheeye si uu u xajiyo burushka siligga ku yaal saxanka aluminium) . Adiga oo beddelaya dhexroorka siligga ee buraashka birta birta ah, qaababka dhumucda kaladuwan ayaa la heli karaa. Noocyada xariirta goos gooska ah ayaa guud ahaan lagu farsameeyaa mashiinada burushka ama mashiinnada wax lagu xoqo. Mabda 'Production: Laba nooc oo giraangiraha kala geddisan ee isku wareegaya ayaa loo isticmaalaa. Qaybta kore waa roogaha wax shiidaya oo dhakhso-wareegaya, qeybta hoose-na waa roog caag ah oo gaabis ah. Saxanka aluminiumka ama aluminiumku wuxuu maraa labada nooc ee rollers waana la sifeeyaa. Khadad jilicsan oo goos goos ah.
Sawir qaab naqshad leh
Waa qaab aan caadi ahayn, oo aan muuqan oo xariir matoor ah oo lagu helay dhaqaajinta iyo xoqidda saxanka aluminium dib iyo gadaal hoostiisa burush silig xawaare sare leh. Nidaamkan noocan ahi wuxuu leeyahay shuruudo ka sarreeya dusha sare ee taarikada aluminium ama aluminium.
Guud ahaan, waxaa lagu sameeyaa makiinada burushka ama mashiinka wax lagu xoqo. Isticmaal dhaqdhaqaaqa foorari ee kooxda sare ee rollers shiida si aad ugu cadayato dusha sare ee saxanka aluminium ama aluminium, Sawir qaab mawjad ah.
Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'optical rotation', oo ah nooc qaab xariir ah oo lagu helo iyadoo la isticmaalayo dareemaha silsilada leh ama la jajabinayo naylon wheel si loogu rakibo mashiinka wax lagu qodayo, iyadoo la isku darayo saliida saliidda leh kerosene, iyo rogista iyo nadiifinta dusha sare ee aluminium ama saxanka aluminium. Badanaa waxaa loo isticmaalaa farsameynta qurxinta ee calaamadaha wareega iyo dialsooyinka qurxinta yaryar.
Waxay isticmaashaa mootar yar oo wareegsan oo laga dareemay usheeda dhexe waxayna ku hagaajinaysaa miiska, oo qiyaastii 60 darajo u jirta miiska geeskiisa.
Intaas waxaa sii dheer, sariir lagu qalabeeyay saxan aluminium go'an oo lagu riixo shaaha ayaa la sameeyaa, iyo filim caag ah oo leh geesaha toosan ayaa lagu dhejiyaa santuuqa si loo xadido tartanka dunta. Iyadoo la adeegsanayo wareegga dareenka iyo dhaqdhaqaaqa toosan ee gawaarida, qaab xariiq ah oo leh balac isku mid ah ayaa lagu xoqay dusha sare ee saxanka aluminium.
Doorka aluminium sawir silig daawaha ah
Saamaynta laga helay sawirka silig waxay lahaan doontaa wax aad u fiican oo wax ku ool ah iyo saameyn isku dhafan. Sawirka siliggu waa geedi socod dayactir. Sababtoo ah waxaa jira xoqitaanno dusha sare ee birta, isticmaal mashiin sawir qaadis ah si aad ugu sameysid xoqid isdaba joog ah dusha oo dhan (yaree dhumucda darbiga) --- dabool xoqitaanka, waxaa ugu wanaagsan in aan (la shaqeynin Ka dib markaad sii adkaato shaqada, way isbeddeli doontaa waxqabadka). Laakiin xoqitaanku way adagtahay in laga fogaado, sidaa darteed badanaa waa la isticmaalaa. Sawiridda ma aha oo kaliya burushka xoqidda dusha sare ee saxanka aluminium, laakiin sidoo kale waxay leedahay saameyn qurxinta muuqaalka saxanka aluminium. (Waxa kale oo jira nidaam "shaabbad kulul" (wareejin aluminium ah oo anodized ah), taas oo sidoo kale saameyn la mid ah ku yeelan karta dusha sare ee qaybaha balaastigga ah.)
Maaddaama qaybo ka mid ah aluminiumku ay ku jiri karaan jawi qoyan oo qoyan ama ay ku urursan yihiin qaybo kale oo qalab kala duwan ah, si loo hagaajiyo loona hubiyo u adkeysiga xirashada, caabbinta daxalka iyo muuqaalka qaybaha, qaybaha daawaha magnesium waa in lagu daaweeyaa dusha sare. Daaweynta ka hor waxay saameyn ku yeelan doontaa buufinta ku xigta. Inta lagu jiro howsha wax soo saar, qeybaha waxaa wasakheyn kara wasakhda qaar sida dufanka, oksaydhka, saliidaha iyo arrimaha qalaad, waana in laga saaraa wasakhda hadhay.
Guud ahaan, soo bandhigida qaybaha aluminium ee aluminium ayaa loo qaybin karaa afar qaybood: nadiifinta farsamada, nadiifinta dareeraha, nadiifinta liinta, iyo nadiifinta aashitada Hababkan waxaa loo isticmaali karaa kali ama isku dhafan. Fiiro gaar ah u yeelo bixinta budada la xoqin karo iyo biyaha inta lagu gudajiro howsha nadiifinta, nadiifintuna waa inay noqotaa mid dhalaalaysa
Waxyaabaha Aluminium, bir birta ah iyo walxo kale oo bir ah waa la caday karaa oo la nadiifin karaa
Isticmaalka Marka loo eego shuruudaha daaweynta kuleylka kala duwan
Hore: Black anodized 6061-T6 aluminium daawaha qaybo machining CNC
Xiga: Qalabka aluminium ee aluminium elektaroonigga ah